प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नमा रोक! यस्तो छ पछिल्लो स्वास्थ अवस्था ( अस्पतालको विज्ञप्ती सहित)::Hamrodamak.com
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नमा रोक! यस्तो छ पछिल्लो स्वास्थ अवस्था ( अस्पतालको विज्ञप्ती सहित)
शिक्षण अस्पतालले उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटघाटमा रोक लगाएको छ ।
काठमाडौं, १३ कार्तिक । शिक्षण अस्पतालले उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटघाटमा रोक लगाएको छ ।
स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि ओलीलाई सोमबार विहान साढे ४ बजे अस्पतालको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना गरिएको थियो । उनको छातीमा संक्रमण हुनुका साथै चिनीको मात्र असन्तुलित देखिएको छ ।
सोमबार नेताहरुले अस्पताल पुगेर ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए ।तर, मंगलबार अपराहृनबाट अस्पतालले भेटमा रोक लगाएको छ । संक्रमण नियन्त्रण गरी स्वास्थ्यलाभ गराउनु पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै शिक्षण अस्पतालले चिकित्सकीय रायअनुसार नै भेटघाटमा प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ ।